दासढुंगा काण्डको २३ वर्ष: दुर्घटना कि षड्यन्त्र, किन सेलायो छानबिन ? - Nepal News - Latest News from Nepal
दासढुंगा काण्डको २३ वर्ष: दुर्घटना कि षड्यन्त्र, किन सेलायो छानबिन ?
By nepalnews	 Last updated May 16, 2016
काठमाडौं,जेठ ३ । नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रतिको सडक दुर्घटनामा परि निधन भएको २३ वर्ष पुरा भएको छ । तर यो घटनाको रहस्य अझै खुल्न सकेको छैन । २०५० साल जेठ ३ गते आजकै दिन पोखरामा भएको एमालेको जिल्ला अधिबेशन सकेर चितवनमा अखिल नेपाल महिला संघको भेलामा आउदै गर्दा भण्डारी र आश्रति चढेको पजेरो जीप दुर्घटनामा परेको थियो ।
जीवराज आश्रितको मृत अवस्थामै गाडीमै शव भेटिएको थियो भने मदन भण्डारीको घटनास्थलदेखि धेरै तल नारायणी नदी किनारमा तीन दिन पछि शव भेटिएको थियो।
दुर्घटनामा जिप चालक अमर लामा जिवित रहनु र पछि उनको हत्या हुनुले नागरिकलो दुर्घटना रहस्यमय मान्दै आएका छन् ।भण्डारी र आश्रति चढेको गाडी दासढुङ्गामा दुर्घटनामा परेको दिनको सम्झना गर्दै नेकपा एमालेले मदन आश्रति दिवस मनाउने गरेको छ ।
एमालेले आज पुरानो पार्टी कार्यालय रहेको मदननगर बल्खुमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । स्मृति दिवसको कार्यक्रम राजधानी र दासढुङ्गा लगायत मुलुककका विभिन्न ठाँउमा आयोजना गरिने छ ।
तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुखको सडक दुर्घटनाबारे अनुसन्धान नगरेको भन्दै एमालेको आलोचना हुने गरेको छ । ०२८ सालमा पुष्पलालसँगको भेटपछि भण्डारी राजनीतिमा लागेका थिए । २०२९ सालमा पुष्पलालको पार्टीले जनवादी सांस्कृतिक मोर्चाको निर्माण गर्‍यो। त्यसको अध्यक्षमा युद्धप्रसाद मिश्र र महासचिव मोदनाथ प्रश्रीत थिए भने भण्डारी केन्द्रीय सदस्य थिए।
२०३० सालमा पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए। अन्याय सहन नसक्ने उहाँको आफ्नैखालको बिद्रोही स्वभाव, विषयवस्तुको उच्चतम् ज्ञानको आधार, साहित्य र सिर्जनामार्फत नविन चिन्तनको विकासले उनलाई बनारसमा सङ्गठित रूपमा क्रियाशील राजनीतिककर्मीहरूसँग नजिकिने वातावरण बनायो।
२०३३ सालमा मुक्तिमोर्चा समूहको निर्माण गरियो। त्यसको निर्माणमा सक्रिय रहेका नेताहरू पुष्पलालको पार्टीसँग विद्रोह गरी २०३४ सालमा नेकपा ९माले०को स्थापना हुनुभन्दा पूर्वको को९अर्डीनेशन केन्द्रुमा आवद्ध भएका थिए भण्डारी।
२०४१ साल वैशाखमा भण्डारी पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य र २०४६ सालमा नेकपा एमालेको चौथो महाधिवेशनमा महासचिव बने। २०४७ सालमा भूमिगत जीवनबाट बाहिर आई माले९माक्र्सवादी एकीकरणबाट उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीको महासचिव बने।
२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनमा नेकाका तत्कालीन सभापति एवम् अन्तरिम प्रधामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई परास्त गरी काठमाडौँ क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।
त्यसयता पटक पटक नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि यो काण्ड त्यतिकै थन्किएर बसेकोमा राष्ट्रियस्तरमै आलोचन हुदै आएको छ
सरकार ढाल्ने खेलमा प्रचण्ड–माधव,अर्याल होटलमा गोप्य भेट !
संघीय गठबन्धनको आन्दोलनकारीबीच नै हानाहान